Data Analyst | Broadway International ﻿
1.10.2018, Full time , Export / Import / Trading
Company: Broadway International
Your satisfaction is always our first concern.Broadway International Co., Ltd. offers high-quality products, competitive prices and prompt delivery.
•	Microsoft Word, Excel, Power Pointအသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။
•	ERP Systemအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Work location 41/F, Yan Naing Swe St., Industrial Zone, Thaketa, Yangon.
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နုိင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Broadway International Co., Ltd. offers high-quality products, competitive prices and prompt delivery.
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နုိင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နုိင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရုပ်ရည်ချောမွေ့ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
Sales Supervisor (Modern Off-Trade)
Sales Supervisor (Distributor Channel)
Data Analyst Admin,Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Broadway International Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Data Analyst Jobs in Myanmar, jobs in Yangon